कांग्रेसद्वारा सभा अवरुद्ध/ प्रतिपक्षीद्वारा सरकारको आलोचना
पङ्खा र नगद सहयोग
डा. गोविन्द केसी प्रकरण/ हेटौंडामा विरोधसँगै सेवा पनि
सन्जुमायालाई १० हजार सहयोग
जन्मदिनमा दिव्यसेवामा सहयोग
निजि विद्यालयको शिक्षण शूल्क निर्धारण गर्दै उपमहानगरपालिका
ट्र्याक्टर र टिपर नियन्त्रणमा
२ महिला बेच्ने ११ वर्षपछि पक्राउ
सरकार विरुद्ध लाग्नुस्ः नेता पौडेल
महिला फुटबल छनौटमा काठमाडौंको जीत
५ विधेयकमा मन्त्रीपरिषद्को सहमति
सुविधाको लोभमा निर्देशिका विपरित अपाङ्गतास्तर निर्धारण/ प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदनलाई हेर्छौंः प्रजिअ
समाज 10 पटक पढिएको सुरेश श्रेष्ठ
हेटौंडा, ४ साउनः नेपाली कांग्रेसले बिहिबार ३ नम्बर प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले विशेष समयमा बोल्दै आफ्नो पार्टीले राखेका माग पूरा गर्न दबाव दिँदै संसद अवरुद्धको घोषणा गर्नुभएको थियो । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची थियो ।
108 प्रकाश दाहाल
हेटौंडा, ४ साउनः मकवानपुरगढी गाउँपालिका ३ को ज्वालादेवी आधारभुत विद्यालयलाई नारी संरक्षण केन्द्र (डब्लुपीसी) ले पङ्खा र नगद सहयोग गरेको छ ।
हेटौंडा, ४ साउनः अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर नदेखिएको भन्दै हेटौंडा अस्पतालमा चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका छन् ।
क्लासिक टेकको अफर
हेटौंडा, २७ कात्तिकः इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेकले घरायसी उपभोक्ताका लागि सुपथ मूल्य अफर ल्याएको छ । क्लासिक टेकले “काईदा छ, फाईदा छ” अफर बजारमा ल्याएको जनाएको छ ।
५० भन्दा बढि हिरासतमा
हेटौंडा, २० मंसिरः विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेका मंगलबारसम्म ५० जना भन्दा बढि हिरासतमा रहेका छन् । आज बुधबार केहि हिरासतमुक्त भए तापनि मतदानको दिनमा ५० भन्दा बढि हिरासतमै रहने प्रहरी उपरीक्षक विकास राज खनालले जानकारी दिनुभयो । हिरासतमा रहनेहरु मतदानको अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् ।